सुन्तलीको तिहार | मझेरी डट कम
छक्कु उदासी — Mon, 11/01/2010 - 12:34
आफूभन्दा दश बर्ष पछि जन्मेको भाइ, सुन्तलीको लागि संसारको सबै भन्दा प्यारो बस्तु बनेको थियो । भाइको राशीको नाम रुबिन भए पनि घराँ बोलाउँदा, गाली अथवा माया गर्दा पारिवारिक नामले लाटा भनेर बोलाईन्थ्यो । सानोमा अरुको भन्दा अस्वभाबिक रुपले मुख ढिलो लागेको थियो । सबैले लाटा बन्ने भो भन्ने अड्कल गर्नुका साथै चिन्ता गर्दा गर्दै बोल्ने भएकोले लाटा उपनामा रहेको थियो । नबुझ्ने हुँदासम्म त, "ए....लाटा" भनेर बोलाउँदा पनि मुसुक्क हाँस्थ्यो, "हडुल" (हजुर) भन्थ्यो । जब अलि बुझ्ने भएपछि लाटा भन्दा रिसाउने भएकोले लगभग अरुले त लाटा भन्न छोडिसकेका थिए । तर सुन्तलीले भने लाटा भन्न छोडेकी थिइन । आफ्नो भाइ दिन प्रति दिन पुर्ण रुपले बुझ्ने हुँदै गएपछि त दिदीले लाटा भनेकैमा रमाउन र मन पराउन थाल्यो । त्यति मात्रै हैन गर्व गर्न पनि थाल्यो ।
भखर लाउँ-लाउँ, खाउँ-खाउँको कलिलो उमेरका नेपाल आमाकी होनहार युवाशक्तीहरू दिनानु दिन बिदेशी तिरै भौतारिदै पलाएन हुँदैछन् । त्यही समयको भेल र भाग्यको खेलसंगै नेपाली संस्कारले सुन्तलीको प्यारो भाइलाई पनि बिदेश तिरै घोँक्रेठ्याकमा पारेको थियो । नचाँहदा नचाँहदै बैदेशिक रोजगारको शिकार बन्न पुगेको थियो । सुन्तलीको भाइले यो पाली पनि आउँन पाईन, नमरी बाँचिएछ र दैबले साँचेछ भने अर्को सालको तिहारमा त पक्कै आउँछु भनेर चिठ्ठीमा बाचा गरेको थियो ।
यो पटक त भाइ बिदेशबाट आउँछ भनेर सुन्तलीको लागि औंशीको रात पनि जुनेली बनेको छ । त्यस्तैगरी सन्तलीले भाइ टिकाको समान जुटाईरहेको छ । सप्तरंगी टिका भिजाएको छ । भाइको गला भरी सजाउँनको लागि रंगी बिरंगी माला बुनेको छ । भाइले के खान्छ, के खादैन, के मनपराउँ छ, के मन पराउँदैन भन्ने मनमनै गुनेको छ । घरमा भाइ नहुँदाको तिता अनुभवहरू छातीभित्रै उनेको छ ।
सुन्तलीलाई बाटामा कोही नौलो मान्छे आएको देखे पनि आफ्नो भाइ आएको झै लाग्न थालेको छ । झनभन्दा झन तिहार नजिकिंदै छ । तर...तर खै..........न भाइ आयो, न भाइको चिठ्ठी नै आयो, सुन्तलीको सारा सपना हुरीले उडायो ............ !
suntalilai mero "happy tihar"
अतिथि — Sat, 11/06/2010 - 15:53
suntalilai mero "happy
अतिथि — Sat, 11/06/2010 - 15:54
Bhai Sangako maya mamata yeti
Kushum (not verified) — Tue, 02/01/2011 - 13:43
Bhai Sangako maya mamata yeti ghadha dekhda Sarai khusshi lagyo.
तीन मुक्तक (खोजी, कोही, कसरी भनौं?)
म कसरी शुभकामना दिऊँ?
रोक्न चाहे परेलीले